Iindaba -Sitayile esitsha kunye nokuQokelelwa okutsha
Hebei Prolink yokungenisa kunye Export Trading Co., Ltd.soloko uthatha uphuhliso lwemveliso kunye nohlaziyo njengesiseko sophuhliso lweshishini, kunye neemfuno zabaxhamli njongo, imfuno yentengiso njongo, kunye nophuhliso oluqhubekayo lweemveliso ezintsha ukuhlangabezana neemfuno zemarike.
Inkampani ihlala ilandela utshintsho lweemarike kunye neemfuno, ihambelana nezinto ezithandwayo, kwaye izama ukuphuhlisa iimveliso ezintsha, iimveliso ezintsha kunye nezinto ezintsha, iindlela ezintsha.
Ngenisa ngokubonakalayo intengiso kunye nokwandisa ukuthengisa kwintengiso.
Inkampani ilawula kwaye isebenza ngokungqongqo ngokungqinelana nemigangatho yenkqubo esemgangathweni ye-ISO9001, kwaye ngokuqhubekayo iphucula umgangatho wolawulo lwenkampani kunye nomgangatho wemveliso ngokweemfuno zenkqubo yesayensi kunye nomgangatho ofanayo.
Iimveliso zethu ezintsha
Ixesha Post: Oct-14-2020